Ị ga-maara ihe ndị a tupu ịzụta E-skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Ị ga-maara ihe ndị a tupu ịzụta E-skateboards
Gịnị ajụjụ a ga-atụle? N'ezie ya Safety. N'ihi ya, anyị Koowheel electric skateboards soplaya ọbọ OA, RoHS, FCC UN38.3 asambodo. Dị nnọọ ka a ụgbọ ala ma ọ bụ bike, ndị a electric skateboards Ọzọkwa kwesịrị omume ọma-nọgidere na-enwe na ebumnuche na-agba ọsọ mụrụmụrụ. Ọ bụrụ na ọ ma eleghị anya adịghị dị ka ọ bụla nke electric skateboards na ị hụrụ ruo ugbu a. Na otu echiche ugbu a metụtakwara ọbụna na-nsogbu dị ka skateboards, ikwe skaters ime ihe ụfọdụ ha nwere ike ọ bụghị na a nkịtị osisi, dị ka ịnyịnya Uphill. Site ugbu a, m ụfọdụ na ị na-na na chepụtara na a kpọmkwem skateboard nwere a obere moto n'ime ya. Batrị, o sina dị, o yiri ka o sina dị adị a na ịmachi ihe na-akpata na a n'ọnụ ọgụgụ nke fashionable electric skateboardaghụghọ. Tupu, ahịa ndị chọpụtara na ha electric skateboard ga-emegide iwu ka ije n'okporo ámá kagbuo ha preorder. Roto-gbalaga skateboard soplaya ( Koowheel ika) azọrọ na-ahụ lightest, kasị, na ọtụtụ elu electric skateboard na mbara ala. Ebe a anyị na-enye unu na-aro ụfọdụ na-esi eme ka ojiji nke electric skateboards na ntukwasi-obi.
E nwere ụfọdụ n'ezie jụụ electric skateboards na ahịa na a ole na ole n'ime ha na-nnọọ ji nkà mepụtara. E nwere skateboards. Nso - Ọ bụrụ na touring na-arụ ọrụ ma ọ bụ ikike nanị na-ewe nkeji iri ị ahụ ga-enweghị ihe ọ bụla nke na ọ ebe ọ bụ na ọtụtụ skateboards nwere ike ekpuchi nke a na a otu na-eri. Dabere abụọ ọsọ na snow pals ndị a kpebisiri ike-ezitekwara kacha mma electric skateboard na mbara ala a, Koowheel Boards bụ ndị ndú na ndi oru nke electric skateboards. Nke a na osisi na-eme oke itunanya nke ọma na anya-okporo ụzọ teren, na-ejizi okwu nke dị iche iche mbadamba pụrụ ọbụna na nrọ nke na ala. Ejikari otu ibu ọnụ kv moto bụ ezuru, ọ nọ na m bụrụ na climes ugwu nnọọ ekwesị na ọ bụ dị ọnụ ala karịa nhọrọ. Gịnị ka ị na-atụle tupu zụọ ahịa n'ihi na otu onye? ọ bụ kasị electric skateboard , ọ bụkwa nnọọ nwayọọ. Olee otú ọ bụ otú onye dị nro? Ọ nwere ike ikekwe iru a ijeụkwụ nke ruo 30 km / h na ọnụ na replaceable batrị mkpọ, 2pcs batrị ngwugwu nwere ike adịru 60km, na-aga ogologo.
Gịnị bụ ụzọ dị irè iji chọpụta otu n'ime kacha mma electric skateboard maka riders, ụmụaka na ndị okenye? Ọzọ spec na-agwa gị a electric skateboard iji na ndị okenye bụ gosiri mmepụta ike nke moto. Ọ bụ ihe na electronic skateboard na a na-nyere na ihe electric moto nke na-eji site na n'ime ime obodo. The ime bụ nnọọ mfe iji, Otú ọ dị, ọ bụ n'ụzọ kwụ ọtọ iji rụọ ọrụ. The mfe na-eji anya management kwe a mfe osooso - na ọbụna pụtara na ị na-agbanwe na azu azu mode!
Post oge: Mar-09-2018